Oring मुख्य स्वास्थ्य लाभ मोरिंगा - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | Mar 1, 2020 | Superfoods, आहार र पोषण |0|
1 मोरिंगाका Major प्रमुख स्वास्थ्य लाभहरू
2 मोरिंगाका अन्य स्वास्थ्य लाभहरू
अधिक र अधिक जानकारी यस तथाकथित सुपरफूडको आश्चर्यको प्रचार गर्ने फेला पार्न सकिन्छ, मोरिंगाका स्वास्थ्य लाभहरू के हुन्?
मोरिंगा: चमत्कारी रूख
तपाईलाई सम्भवतः शरीरको स्वास्थ्य प्रबर्द्धन गर्ने हरी, पातदार तरकारीहरूका धेरै लाभदायक प्रभावहरूको बारेमा सचेत गराइएको छ। मोरिंगा छुट छैन। वास्तवमा, यसलाई प्रायः एक चमत्कारी रूख भनेर पनि चिनिन्छ किनकि यसको विस्तृत औषधीय गुणहरूको दायराको कारण।
मोरिंगा एक द्रुत-बढ्दो र खडेरी-प्रतिरोधी रूख हो जसको नाजुक र झर्ने शाखाहरू हुन्छन्। यसका पातहरू हरियो र फेदर हुन्छन्, गोलाकार आकारको पर्चा र त्रिपक्षीय बीजको गुच्छा क्लस्टरहरूमा झुण्डिएको हुन्छ।
यदि तपाईं मोरिंगा नामसँग परिचित हुनुहुन्न भने, त्यसो हुनसक्छ यो तपाईंको क्षेत्रको ड्रमस्टिक रूख, बेन तेल रूख, वा हर्स्रेडिश रूख हो।
यो यसको स्वास्थ्य लाभ को लागी प्रशंसा गरिएको छ र शताब्दीहरु को लागी धेरै प्राकृतिक प्रक्रियाहरु को लागी बिभिन्न उपचारहरुमा सहयोग गर्न एक प्राकृतिक औषधि को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
त्यसोभए, यस बोटको लागि के यो विशेष हो कि यो चमत्कार रूख डब गर्नका लागि? मोरिंगाको great महान स्वास्थ्य लाभहरू पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।
उत्कृष्ट पौष्टिक मूल्य
मोरिंगा पातहरू भिटामिन ए, बी १, बी २, र बी with बाट भरिएका हुन्छन्। तिनीहरूसँग क्याल्सियम, पोटेशियम, फलाम, म्याग्नेशियम, फास्फोरस, र जिंक जस्ता खनिजहरू पनि हुन्छन्।
कोसामा असाधारण विटामिन सी समृद्ध हुन्छ, जुन शरीरको ऊतकहरूको विकास र मर्मतको लागि आवश्यक छ। मोरिंगामा संतरे भन्दा सात गुणा बढी भिटामिन सी र केराभन्दा पन्ध्र गुणा अधिक पोटेशियम हुन्छ भनिन्छ। यसले हानिकारक कोलेस्ट्रोलको साथ थोरै फ्याटहरू समावेश गर्दछ।
ती बाहेक, मोरिंगा एन्टिऑक्सिडन्टहरूको पनि एक उत्तम स्रोत हो जुन फ्रि रेडिकलहरूसँग लड्छ। शरीरमा स्वतन्त्र रेडिकलको एक उच्च स्तरको ऑक्सीडेटिव तनाव भएकोसँग जोडिएको छ जुन पुरानो बिरामी हुन र बुढेसकालको गति बढाउन सक्छ।
एन्टिआक्सीडन्टहरूले कोषहरूलाई क्षतिग्रस्त हुनबाट बचाउँछ। उनीहरूले कडा प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।
यी स्वास्थ्य सुविधाहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले आफ्नो आहारमा मोरिन्गा पात र पोडहरू थप्नु पर्छ।
यो पौष्टिक रूपमा बाक्लो र तातो र सुक्खा वातावरण प्रतिरोधी छ, यो पौष्टिक कमी को भर्न को लागी एक व्यावहारिक उपाय को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसको लागि कठिन परिश्रमको आवश्यकता पर्दैन, यसले कुपोषणको व्यावहारिक समाधान बनाउँदछ। अन्य देशहरूमा पातहरू सुकाइन्छन् र पौष्टिक आहारका रूपमा बेच्दछन्, कि त पाउडर वा क्याप्सुलको रूपमा।
यो राम्रो विकल्प पनि हो यदि तपाईं मोरिंगा प्लान्टहरू आफु नजिक वा बजारमा फेला पार्न सक्नुहुन्न भने।
रगत को लागी राम्रो
धेरै अध्ययनले शरीरमा रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्न मोरिंगाको आशाजनक प्रभाव देखाएको छ। ती मध्ये धेरैले पशुलाई विषयको रूपमा प्रयोग गर्थे, र केवल केहीले मात्र मानिसमा हुने प्रतिक्रियाको परीक्षण गर्थे।
यद्यपि यसले स that्केत गर्दछ कि मोरिंगाले शरीरलाई रगतमा चिनी मिलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। मुरिंगा पातमा रहेको एन्टिआक्सीडन्ट क्वेरेसेटिन र क्लोरोजेनिक एसिड दुई मुख्य तत्त्वहरू हुन् जसले रगतको अवस्थालाई असर गर्दछ।
क्वेर्सेटिनले रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि क्लोरोजेनिक एसिडले खाना पछि रगतमा चिनीको मात्रा मध्यम गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै बोटमा आधारित फूड जस्तै, मोरिंगा पनि उच्च कोलेस्ट्रॉल बिरूद्ध एक उपायको रूपमा प्रयोग गरीन्छ। अत्यधिक मात्रामा कोलेस्ट्रोलले उच्च रक्तचाप र मुटु रोग सार्न सक्छ।
त्यहाँ पशु-आधारित र मानव-आधारित अध्ययनहरू छन् जसले मोरेन्गा प्लान्टको कोलेस्ट्रॉल-कम प्रभावहरूको सम्बन्धमा दावी समर्थन गर्दछ।
हरियो, भिटामिन सीमा पाइने तरकारीहरू, जस्तै मोरिंगा, रगतमा फलामको अवशोषणमा सहायता गर्दछ। फलाम रगत उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण खनिज हो।
धेरै अध्ययनले देखाउँदछ कि मोरिन्गा पात र अर्कहरूले हेमोग्लोबिनको स्तर बढाउन सक्छ जसले अ organs्ग र टिश्युहरूमा अक्सिजन बोक्छ।
यी परीक्षाहरू मध्ये धेरै मानिसमा गरिएको छैन, त्यसैले यो आवश्यक छ कि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् वा मोरेन्गा पातलाई आफ्नो आहारमा समावेश गर्नु अघि विशेषज्ञको सल्लाह लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
यो संक्रमण वा चोट को अनुभव गर्दै छ जब सूजन शरीरको प्रतिक्रिया हो। यद्यपि यो एक प्राकृतिक घटना हो, दीर्घावधीको ईन्फ्लेमेसनले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पनि दिन सक्छ। केही अध्ययनहरूमा, मोरिंगा जनावरहरूमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू परिक्षण र प्रमाणित गरियो।
आइसोटियोसाइनेट्स भनिने यौगिकहरू त्यस्ता गुणहरूका लागि जिम्मेवार हुन्। मोरिंगाले भडकाउने फ्लेयरहरू व्यवस्थापन गर्दछ र उनीहरूसँगै हुने दुखाइ कम गर्न भनिन्छ।
यद्यपि यस दावीलाई निर्णायक बनाउन अझ बढी अनुसन्धान आवश्यक छ।
शरीरलाई संक्रमण बिरूद्ध बचाउँछ
मोरिंगा प्लान्टमा समावेश धेरै यौगिकहरूमा एन्टि-बैक्टीरियल, एन्टि-फgal्गल, र एन्टि-माइक्रोबियल गुणहरू छन्। यसले चमत्कारी बोटलाई यस्तो सूक्ष्मजीवहरूबाट हुने संक्रमणलाई रोक्नको लागि प्राकृतिक उपचार बनाउँदछ।
मोरिंगा खाना संरक्षण र पानी उपचारमा सम्मिलित छ किनकि यसले साल्मोनेला र फgi्गीको बृद्धि गर्दछ। केही अध्ययनहरूले पानीको नमूनाहरुमा उपस्थित ईकोली ब्याक्टेरियासँग लड्न मोरिंगा अर्कको प्रयोग गरेका छन्।
तपाईको खानामा मोरिंगा थपेमा तपाई रगत र पाचन प्रकारको ब्याक्टेरिया संक्रमणको साथ साथै छालाको फgal्गाल प्रतिरोध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। यो घाउहरू र माइनर कट्सको उपचारमा एन्टिसेप्टिकको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
यसको उच्च पोषण घनत्व र औषधीय गुणहरूको कारण, मोरिंगा केही रोगहरू रोक्नको लागि एक सुपरफूड र घरेलु उपचार भएको छ।
मोरिंगा रूमेटोइड गठियाको पीडाबाट पीडित मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्षम हुन सक्छ।
रुमेटीइड गठिया एक रोग हो जुन क्रमिक रूपमा बिगार्दछ, जोर्नीहरूमा दर्दनाक सूजन पैदा गर्दछ, विशेष गरी हात र खुट्टामा।
मोरिंगामा प्राकृतिक एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू छन् जसले तपाईंको शरीरलाई सूजन र पीडासँग सम्झौता गर्न मद्दत गर्दछ।
मोरिंगाको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणसँग मिल्दै क्याल्शियम र फास्फोरसले हड्डीको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ। यसले गठियाको उपचारमा र बिग्रेको हड्डीहरूलाई निको पार्न मद्दत गर्न सक्छ।
मोरिंगाका अन्य स्वास्थ्य लाभहरू
दावी गरिएको छ कि मोरिंगाले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ। मोरिंगामा एन्टिऑक्सिडन्टहरूले क्यान्सर हुने खतरा कम गर्दछ।
मोरिंगा अनुसन्धान गरिएको छ यौगिकहरू समावेश गर्न जुन क्यान्सरयुक्त कोशिकाको पीढीलाई दबाउँछ। त्यस बाहेक, एन्टिआक्सीडन्टहरूले पनि मिर्गौलामा विषाक्त पदार्थहरू हटाउन सक्छन्, यसैले विफलता रोक्न सकिन्छ।
यो पनि भनिन्छ वजन घटाउन प्रचार गर्नुहोस्, पेटका विकारहरूबाट राहत प्रदान गर्नुहोस्, एक्जिमा र सोरायसिस नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
एनीमिया एक अवस्था हो जुन रगतमा हेमोग्लोबिनको अभावले हुन्छ। लक्षणहरूमा थकान र लाइटहेडनेस समावेश छ।
किनभने मोरिंगाले फलामको अवशोषण र हेमोग्लोबिनको स्तर बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, यो फलामको अभाव रक्ताल्पता को लागी एक समाधान पनि हुन सक्छ।
एनीमिया एक पौष्टिक विकार हो जुन २ वर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई असर गर्दछ र मुख्यतया फलामको अभावले योगदान पुर्‍याउँछ।
मा एक अध्ययन एनीमियामा मोरिंगाका फाइदाहरू भनेका थिए कि "को उपयोग मोरिंगा पातको पाउडरले रक्तअल्पतासम्बन्धी रोगहरूको प्रकोपलाई आधा घटायो र मध्यम रक्तअल्पतासम्बन्धी मामिलाहरूमा राम्रोसँग काम गर्यो। ”
किनभने यो रगतको लागि राम्रो छ, मोरिंगाले हृदय रोग र उच्च रक्तचापको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ। मोरिंगाको रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न क्षमताले यसलाई मधुमेहको लागि एक व्यावहारिक रोकथाम उपाय बनाउँदछ।
मोरिंगा को एन्टी-भड़काऊ गुण, ईडेमा को विकास रोक्न सक्छ। एडेमा एक दर्दनाक स्वास्थ्य समस्या हो जुन शरीरको टिश्युहरूमा फ्लुइडको निर्माण द्वारा विशेषता हो।
मोरिंगा पात र पाउडर प्रयोग गरिएको छ यौन प्रदर्शन वृद्धि, कामेच्छा बढाउनुहोस् र यौन रोगको उपचार गर्नुहोस्.
अन्य प्राकृतिक उपचारहरू जस्तै, मोरिंगाले केही साइड इफेक्टहरू पनि थोपेको छ। जसमध्ये एउटा यो हो कि यसले प्रजनन क्षमतामा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। तसर्थ, गर्भवती महिलाहरूले डाईजेक्टि or वा मोरिंगा प्रयोग गर्नु अघि पहिले चिकित्सा सल्लाह लिनु पर्छ।
साथै, यसले रगत चिनी र दबाब कम गर्दछ, जो पहिले नै मधुमेह वा उच्च रक्तचाप औषधी मा छन् व्यक्तिहरूले यस खानाको खपत सीमित गर्नु पर्छ। यो शुगर लेभल वा रक्तचाप धेरै कम हुनबाट जोगिन हो, जुन हानिकारक पनि छ।
नोट गर्नुहोस् कि नियम "मध्यम मोडमा सबै" सधैं प्रत्येक डाईटमा लागू हुन्छ। मोरिंगाको उचित तयारी सिक्नुहोस्, कुन भागहरू अन्तर्ग्रहण गरिएको हो वा हुँदैन सहित।
जब यो मोरिंगा सप्लीमेन्ट्सको कुरा आउँछ, निर्माताको दावीहरूको वैधता सुनिश्चित गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। मोरिंगाका गुणहरू प्रायः निवारक उपायहरू मात्र हुन्।
उचित स्वास्थ्य समस्याहरूको अनुभव गर्दा उचित उपचारको लागि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
पछिल्लोदिनको लागि १ सकारात्मक सोच तपाईंको आत्मसम्मानलाई सुधार गर्न सक्छ
अर्को२०२० मा सीभी राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू